အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့နှင့် UNFC တွေ့ဆုံမည် | ဧရာဝတီ
သန်းထိုက်ဦး| February 18, 2013 | Hits:3,519
0 | | ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တနေရာတွင် ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ၄ ရက်ကြာ ကျင်းပသည့် UNFC ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံ – သန်းထိုက်ဦး / ဧရာဝတီ)
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံး အကြိမ် တရားဝင် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ထားသည်။
နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့်နေရာအား ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ကို အဆိုပြုထားပြီး အစိုးရဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် တချို့ယနေ့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း UNFC မှ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဦးခွန်ဥက္ကာ က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကို UNFC မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာနှင့် ဒေါက်တာ လဂျာ တို့က ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ဦး ခန့်ကို ဦးဆောင် ၍ အစိုးရဘက်မှ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်ပြီး ဦးခင်ရီ၊ ဦးအုန်းမြင့် အပါအ၀င် ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့ တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးခွန်ဥက္ကာကမူ အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိပေ။ သို့သော်၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက ဦးအောင်မင်းနှင့် UNFC ခေါင်းဆောင်များ နောက်ဆုံး အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို နိုင်ငံ ရေး အရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရ နှင့် UNFC ကိုယ်စားလှယ်များကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့် အကြောင်း အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ သဘောတူညီမှု ရရှိပါက ထိုနေ့ညနေပိုင်းတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တရပ် ပူးတွဲ ပြုလုပ်ရန်လည်း စီစဉ်ထားသည်ဟု ဦးခွန်ဥက္ကာက ဆက်ပြော သည်။
နိုင်ဟံသာက ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း အစိုးရတပ်က ထိုးစစ်ဆင်နေမှုများအား ရပ်ဆိုင်းရန် အဓိကထား၍ ဆွေးနွေးရန် စီစဉ် ထားကြောင်း ယခု လဆန်းပိုင်းက ပြောဆိုထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တနေရာတွင် ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ၄ ရက်ကြာ ကျင်းပသည့် UNFC ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် နိုင်ဟံသာက သတင်းထောက်များကို ထိုသို့ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ အဖွဲ့အ၀င်ဖြစ်တဲ့ KIA (ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်)ကို အကူအညီပေးဖို့ တာဝန်အပြည့်အ၀ ရှိတယ်။ ဒီ ကိစ္စအတွက် ကျနော်တို့နဲ့ ဦးအောင်မင်းတို့ မကြာခင် တွေ့ဖို့ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ပြည့်ပြည့်၀၀ တဖက်က ဖိပြီးဆွေးနွေး ပါမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
KIA ကို ထိုးစစ်ဆင်နေမှုအား ရပ်ဆိုင်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက် ၄ ရက်ကြာ UNFC အစည်း အဝေး တွင် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ၃၀ နီးပါး တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
KIA ကလည်း UNFC အနေနှင့်သာ အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆွေးနွေးလိုကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် လက ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထား သည်။
UNFC အစည်း အဝေးသို့ ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO)၊ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊ ကရင်နီ ပြည်သူ့ တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)၊ ပအို့ဝ်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (PNLO)၊ ပလောင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF)၊ ရခိုင် အမျိုးသားကောင်စီ (ANC)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် သမဂ္ဂ (LDU)၊ ‘၀’ အမျိုး သားအဖွဲ့ချုပ် (WNO) တို့မှ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အမျိုးသား တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် KNU, KIO အစရှိသည့် လက် နက်ကိုင် ၆ ဖွဲ့ဖြင့် ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး ကော်မတီ (CEFU) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဖွဲ့ဖြစ် လာကာ UNFC အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကချင်ထိုးစစ်အရေး UNFC က ဦးအောင်မင်းနှင့် ဆွေးနွေးမည်
အစိုးရနှင့် UNFC နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရန် အကြိုတွေ့ဆုံ
မြန်မာ အလုပ်သမားများ ဘဏ်မှတဆင့် အိမ်ကို ငွေလွှဲနိုင်တော့မည်
ထိုင်းတွင် ညှဉ်းပန်းခံရသူ ကရင်မိန်းကလေးကို မြန်မာအစိုးရ သွားရောက်ကူညီ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ချစ်သခင် February 18, 2013 - 8:23 pm	ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်အောင်တော့ မဆွေးနွေးကြပါနဲ့နော်။ လူကြီးလူကောင်းများ၏ နား၊ ဦးနှောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုတာကို အစဉ်အမြဲ ထည့်ထားပြီး ပြည်သူများတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ဒုက်ခရောက်၊ နောက်ကျသွားနေတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။
Reply	ko khine February 20, 2013 - 2:59 am	Here is some topic for UNFC have to bring for ethnic minorities right. I believed they, the Burmese people and government will agree on what we want too. We the ethnic groups also want to serve our beloved country and our people.
As I mention several time in my previous comment . Respect for equality of ethnic gourps and sovereign equality of States, the country highest President post should go to Arakan, Bumar, Chin, Kachin, Karen, Mon, Shan ethnic groups to one term. We, ethnic groups doesn’t mind one of the general will fill the Vice-president post , 1, or2..
At least one ethnic groups representative have to pick up for Minister post. As for deputy minister ,we have to pick according to the number of ethnic groups as well. There were 36-minister andabunch deputy minister were over seeing the country right now.
Currently, Myanmar government maintains diplomatic and consular relations with 75 countries in all five continents of the world. It has established embassies in 29 countries. As for Ambassador , at least one ethnic representative have to pick up from each ethnic groups.
As for border guard or national arm forces, There were six Bureau of Special Operation groups and thirteenth regional military commander. We must have half of ethnic representative in this Bureau of Special Operations and also ethnic representative for regional commanding commander. They the Burmese people will still in majorities and they still have the Lion share . I believed President Thein Sein government and the Burma people will know what to do for ethnic minorities groups involvement in Myanmar. We all want to be apart of Myanmar and we want to have the right to serve our people and our country. When we talk about national unity, peace , harmony and equal right , majority of the Burma people have to change their old ideology and go forward for equal right. That will make itabetter country and peaceful country. We will be the next Asian Tiger again
တပ်မတော် ထိုးစစ်များ ရပ်ပေးရန် UNFC တောင်းဆို
UNFC ၏ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးပွဲ ထိုင်းစစ်တပ် ခွင့်ပြုချက် ရရန်လိုလာ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မပြင်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လမ်းမမြင်ဟု UNFC ပြော
တပ်မတော်၏ သဘောထား ၆ ချက် မျှတမှုမရှိဟုဆို
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် UNFC နှင့် အစိုးရ သဘောတူညီမှုမရ
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ရန် UNFC တောင်းဆို